Shirka dib loogu eegayo Sanadka dhamaanaya xogta Malaariya Puntland oo Garowe ka Furmay. – Idil News
Shirka dib loogu eegayo Sanadka dhamaanaya xogta Malaariya Puntland oo Garowe ka Furmay.
Posted By: Idil News Staff December 20, 2021
Garowe, Dec,20, 2021: Waxaa maanta ka furmay xarunta dhexe ee wasaaradda caafimaadka dawlada Puntland shirka dib u eegista malaariyadda saddexdii bilood ee la soo dhaafay iyo guud ahaan sanadka 2021.
Shirkaan waxaa ka soo qaybgalay shaqalaha xogta gobolada iyo degmooyinka kuwaasoo ku soo bandhigaya xogta malaariyada sanadka dhamanaya 2021, waxaa lagu soo bandhigi doonaa labada maalmood oo uu socon doono, hoos udhaca ku timid kiisaska laga helayo gobolada iyo meelaha wali ay ka jirto.
Dr Abdikariin Xuseen Xasan Madaxa Malaariyada wasaaradda caafimaadka oo shirka furitaankiisa ka hadlay ayaa yiri:-
“ Waxaan ku faraxsanahay ka soo qaybgalkiina shirkaan saddexdii biloodba mar la qabto sidoo kalena ay wehelinayo kii sanadka dhamaanaya oo aan dib iskula eegi doono una qiimayn doono.
“Shirka inta uu socdo waxaa la iskula wadaagi doonaa xogta aad soo gudbiseen waxa la rabo in laga sii hormariyo sanadka cusub iyo sixitaanka haddii ay jireen wax khaldamay sanadka dhamaanaya 2021.”
Mudane Cabdirisaaq Cartan Madaxa xogta wasaaradda caafimaadka Puntland oo isaguna furitaanka shirka ka hadlay ayaa ka soo qaybgalayaasha la wadaagay sanadka dhamaanaya xogta ay soo gudbiyeen meelaha ubaahan in laga saxo iyo sidii loo sii hormarin lahaa sidoo kale muhiimadda wasaarada ay ugu fadhio xogta ay ka soo gudbiyaan degmooyinka iyo gobolada.
Agaasimayaasha caafimaadka asaasiga ah Abdirisaaq Abshir iyo Qorshaynta Dr Xidig oo shirka si wada jir ah uga hadlay ayaa labaduba xusay muhiimaddda shirkaan leeyahay iyo waxa laga filayo marka uu soo dhamaado oo ay ugu horeeyaan horumarinta qaabka xogta loo soo gudbiyo gaar ahaan xanuunka malaariyada waxay bogaadiyeen in aad ay hoos ugu dhacday helitaanka kiisaska laga soo qorayo.
XAFIISKA WARFAAFINTA WASAARADDA CAAFIMAADKA DOWLADDA PUNTLAND.